Midowga musharaxiinta oo la kulmaya Beesha Caalamka | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga musharaxiinta oo la kulmaya Beesha Caalamka
Golaha ay ku mideysan yihiin musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2021 ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan Beesha Caalamka iyagoo kala hadli doona arrimaha doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya 2021 ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu wadaa in ay shir la yeeshaan wakiilada Beesha Caalamka ee ku sugan Xerada Xalane ka hor banaanbaxa Jimcaha.
Kulanka ayaa ku qabsoomaya aalada Fogaan Aragka ee (ZOOM) xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka Soomaaliya ayaa looga hadli doonaa kulanka.
Kulanka midowga musharixiinta iyo wakiilada Beesha Caalamka ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli la qorsheynayo in uu dhaco maalinta Jimcaha bannaanbax weyn kaasoo ay iclaamiyeen xubnaha golaha midowga musharaxiinta, waxaana looga soo hor jeedaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo.
Xubnaha ka socda midowga musharixiinta ee ka qeyb galaya shirka ayaa lagu wadaa in Beesha Caalamka ay u gudbiyaan xaaladaha kajira dalka iyo in aysan ku qanacsaneyn in arrimaha doorashooyinka loo madax banneeyo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.
Waxaa laga yaabaa in Beesha Caalamku ay ka codsadaan golaha in ay baajiyaan bannaanbaxa lagu wado inuu ka dhaco Muqdisho, sababo la xiriira amniga awgiis, hayeeshee lama saadaalin karo in ay aqbali doonaan golaha midowga musharaxiinta.